Kunamata Kunongedzera Kupikisa Zvakaipa Zvipere | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Kunongedzera Kurwisa Zvakaipa Zvitsinga
Kunamata Kunongedzera Kurwisa Zvakaipa Zvitsinga
Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo zvinopesana nezvakaipa zvitsinga Chii chinouya mupfungwa kana iwe uchinzwa huroyi? Zvitsinga zvitsinga zvemadhimoni izvo zvinoshandiswa kukumbira dhimoni kana kuroya munhu. Iko hakuna musiyano unooneka pakati pechiperesi neicho chihedheni. Iwo ese matauriro emadhimoni ekugadzira njodzi yemweya. Zvitsinga huroyi hwakaipa kutora hunhu hwemunhu, achivamanikidza kuti vaite zvinhu zvinopesana nekuda kwavo kana chinangwa.
Dzimwe nguva, zvitsinga zvinogona kuuya muchimiro chekutukwa pamunhu. Aya madhimoni anoshandiswa kutuka mumwe munhu kana kuisa munhu muhusungwa. Chero ani anoshanda achimanikidzwa nehuroyi kana huroyi, munhu akadaro anozobatwa nemweya wakaipa uyo unenge uchimumanikidza kuti aite zvinhu zvinopesana nekuda kwavo. Asi Mwari ari kuda kuputsa zvese zvakaipa huroyi muhupenyu hwevanhu. Chero huipi hwakaipa hwakakubata pasi kwemakore, hunotyorwa muzita raJesu.
Rangarira rugwaro runoti mubhuku ra Genesi 12: 3 Zvino ndicharopafadza vanokuropafadza, nekutuka unokutuka; uye mauri marudzi ose enyika acharopafadzwa. Simba raMwari rinopa mhosva chero muromo uchitaura zvakaipa pamusoro pehupenyu hwako.
Wati waona here chero munhu akakukomberedza anongoerekana achinja kubva pane zvakanaka kuenda pane zvakaipa? Nguva zhinji hakusi kwavo kuda kana kuronga kuchinja. Icho chinonyanya kuratidzwa kwemashiripiti akaipa ayo akanzi anovabata. Ndosaka vachizoita zvinhu ivo vasingazivi. Ndinoraira nesimba rematenga, zvese zvakaipa zvitsinga zvave zvichikubata pasi, zvakaputswa nhasi muzita raJesu. Ndiri kuzivisa rusununguko ruzere paupenyu hwako nhasi muzita raJesu.
Kana iwe ukamboona chero chinhu chinoshamisa muhupenyu hwako kana hupenyu hweumwe munhu padhuze newe, hapana nguva iri nani yekusimudza aritari yekunamatira ivo. Mwari anorayira uyu gwara remunamato wekusunungura vanhu kubva kune yakaipa spell yanga ichitambudza hupenyu hwavo. Paunotanga kushandisa gwara iri, dai mutumwa waIshe ave newe, ruoko rworudyi rwaMwari ngaruparadze ruoko rwese rwemuvengi pamusoro pako muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kwamuri nhasi kuti muparadze huipi hwese muhupenyu hwangu. Yese dhimoni remashiripiti emuvengi arikutamba neangu hupenyu nehupenyu hwangu, ndinonamata kuti nemoto weMweya Mutsvene, uvaparadze muzita raJesu. Zvese zvouroyi zvanga zvichishandiswa kukumbira mweya yakaipa kurwisa hupenyu hwangu, ndinotema nesimba reWekumusoro soro, Ishe vaparadzei nhasi muzita raJesu.
Ishe Mwari, zvese zvechidhimoni zvinopesana nehutano hwangu, zvichindishandura kuva chinonamira chisingaperi, ndinoraira kuti moto waIshe uchapisa zvitsinga zvakadaro muzita raJesu. Wese murume akasimba mumba mababa vangu kana amai amai vachishandisa zvitsinga zvinopesana nehutano hwangu, regai vanhu vakadaro vauye kurufu muzita raJesu. Tenzi, rurimi rwese ruchitaura huroyi hwakaipa pamusoro pehupenyu hwangu, ndinonamata kuti uteme rurimi irworwo muzita raJesu.
Baba Tenzi, zvakaipa zvese zvinopokana nehupenyu hwangu hwewanano. Izwi rese rinotaurwa rine chinangwa chekuparadza imba yangu. Nekuti zvakanyorwa, ndiani unotaura uye zvinoitika kana Ishe vasina kuraira? Ndinoraira nemoto weMweya Mutsvene, rurimi rwoga ruchitaura zvinopesana nehupenyu hwangu hwewanano rwakatemwa nhasi muzita raJesu. Ndinoraira nemoto weWekumusoro soro, murume wese achitaura zvakaipa pamusoro pemumwe wangu uye neni, Ishe, ngavatowire kurufu muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata ndichipesana nechero huipi hwekukanganisa hwataurwa pamusoro pehupenyu hwangu. Izwi rega riya rakataurwa richipesana nehupenyu hwangu, richikonzera kuti ndikundikane munenge pakuedza kwese muhupenyu, ndinoriparadza nemvumo yedenga. Nekuti zvakanyorwa, taura chinhu, uye zvichasimbiswa. Ishe, zvese zvitsinga zvekutadza pamusoro pehupenyu hwangu zvinoparadzwa muzita raJesu. Kubva ikozvino zvichienda mberi, ini ndinotanga kushanda mune imwe nzvimbo yekugona muzita raJesu. Kwese kuedza kundidzikisira pasi kwakaparadzwa muzita raJesu.
Baba Tenzi, tsvina yese inopesana nehupenyu hwangu hwemweya, ndinouya pairi nesimba remweya mutsvene. Izwi rese rakataurwa kupa hupenyu hwangu hwepamweya husina simba, ndinopa chirevo kuti rakaparadzwa muzita raJesu. Kubva ikozvino, ini ndinogamuchira nyasha dzekumhanyisa pamweya muzita raJesu. Handichamiswa zvakare muzita raJesu. Ini ndinoramba kuita anonamata asina ropa. Moto uri paartari yehupenyu hwangu hwekunamatira unogashira simba rakawanda rekutsva muzita raJesu.
Ishe, ndinoparadza huipi hwese hwakataurwa pamusoro pehupenyu hwevana vangu kukanganisa ramangwana ravo. Nekuti zvakanyorwa kuti, vana vangu neni tiri vezviratidzo nezvishamiso. Ini ndinouya kuzopesana neshoko roga roga rinotaurwa kupesana nedanho ravo nemuzita raJesu. Ivo havazokundikani chinangwa chaMwari chehupenyu hwavo muzita raJesu.
Ini ndinopa kutongwa kwaIshe pane hofori yerudzi rwangu ndichiedza kukanganisa hupenyu hwangu nenjodzi yakaipa. Kutuka kwese kwakaipa kwave pamusoro pangu, ndinovaparadza nemoto wemweya mutsvene. Zvino ndicharopafadza vanokuropafadza, nekutuka unokutuka; uye mauri marudzi ose enyika acharopafadzwa ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Wese munhu anovhura yake kundituka achatongwa nemuzita raJesu. Ndinoraira kuti mutumwa werufu ashanyire munhu wese anotambudza hupenyu hwangu nenjodzi yakaipa muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kupokana Nechibairo Chakaipa
inoteveraKunamata Kunongedzera Kune Akaipa Maboss
Makumi makumi matatu eminamato yekudzoreredza kubwinya kwakarasika
21 Minamato yeMinyengetero yekutungamira kwaMwari
30 Hondo dzeMweya minamato Yekurwisa Midzimu dzeMagungwa